ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ထူးဆန်းသော ဝန်ချတောင်းပန်စာ”
Good shot , Ko Paw ;D ;D ;D
( clap ..clap...clap )
Sincere Reader said...
I "sincerely" copy this comment from Irrawaddy blog..love to share that incredible comment here:))))))
"We sincerely apologize for our sincere mistake and will sincerely continue to do it because we did it sincerely and still sincerely believe that it is the right thing to do even though we were sincerely wrong about it." - The Noise Weekly
ကြုံတုန်းတခုလောက် အကြံပေးပါရစေ။ Allow Blog Feeds ကို Full လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်တုန်းက ဘလော့တွေကိုဖတ်တော့ reader နဲ့ ဖတ်ရတာပဲ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါရဲ့ ဘလော့က အပြည့်ပေးမထားတော့ ဖတ်လို့မရခဲ့ဘူး။
so annoying post. shame on you, ko pyaw, oh sorry, ko paw!
thanks, ko paw
we visit and read your blog is to prevent people from bad ideas and misleadings.
Justaplace to let people know what's right & wrong.
Don't think you are very popular.
Please accept comments and reply in correct manners.
I respect Dr. Nay Win Maung with his pen name "Aung Htut" who runs the Voice and Living Colour magazine more than 90% of the opposition activists and self styled leaders out of Burma.
He isareal follower of Daw Su's advice more than those who are paying lip service to Daw Su.
Dr. Nay Win Maung went to Yale
forapost graduate fellowship, even though it might not have led to any degree, it will help him learnalot. He earned MBBS in Yangon from IM1, its admission
process is more transparent and meritocratic than some overseas universities. So he is an able man with courage. I do not understand why are you attacking him. Afterall, we do not have balls to
go back home and set upajournal
and work within the constraints.
I respect him more than DVB and Irrawaddy combined.
Hi KP, what I think that Dr. Nay Win Mg's apologies wouldbacceptable rather than Myat Khaing's appologies if he also do so.
ဒီမိုကရေစီအရဆိုရင် မှန်သူရောမှားသူပါ တညီတည်းလေးစားရမယ်။ ဒါကြောင့် မုဒိမ်းမှုဖြစ်ရင် အစော်ကားခံရသူရဲ့ နစ်နာမှုတင်မက မုဒိမ်းကောင်ရဲ့ အာသာရမ္မက်ကိုလည်း လေးစားရမယ်။ ဘယ်သူမှ မနာစေပဲ ဖာချခဖြင့် ကြေအေးရမယ်။ ဒါလည်း မုဒိမ်းကောင် တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာသာ ဖြစ်ရမယ်။ အိတ်ထဲရှိသမျှ မတောင်းသင့်ဘူး။ ၅၀% ပဲ တောင်းသင့်တယ်။
ကျနော်တို့ အားလုံးကို win-win ဖြစ်စေချင်လို့ ဖာချခကို ယူဖို့ စေတနာအရင်းခံပြီး တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ တဖက်ကလည်း တန်ရာတန်ကြေးပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို မတန်တဆဈေးနိမ်ခံရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့မှားတယ်လို့ ၀န်ချတောင်းပန်ပါတယ်။
- The Noise Weekly
P.Ti.... Feed နဲ့ပတ်သက်ပြီး Feedback ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် Setting ထဲမှာ ဝင်ပြီး ပြင်လိုက်ပါပြီ။
It is more complicated than rape.
The Burmese armed forces is the
only Burman held institution in
a country with 60,000 strong
ethnic and religious lunatic
In sense, phased transition may
not be an ideal but it makes
less riskier. The ideal situation will beagovernment in which power is shared between Daw Su, some leading generals and right mix of race and religion in the cabinet who shares same values. But we are not in ideal world.
So the voice had done good job,
they advocated for NDF - NLD leaders should have helped NDF
to win more seats but while Daw
Su was inside NLD leaders were
clueless and when Dr. Nay Win
Maung wrote his frustrations
with courage, we should admire
him. I do not see reasons to
critisize him. Afterall he is
far more better than those bums
To Myo Myint Maung,
Good. I like your idea.
Can you tell me where is your sister staying?
I will bring $100 ( in cash) so that 50% is considered "Not Bad".
လက်စက်သတ်တော့ မြန်မာပြည်က မုဒိန်းကောင် သန်းရွှေ ကိုပေါဘလော့မှာ comment လာရေးနေတာကိုး။
(referring အပေါ်က မုဒိန်းကောင်)
" သဘောက်ဂျာနယ်မှ ဝဲထူနေသောခွေးကြီးရဲ့
ထူးဆန်း ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အံဖတ်"
To Anonymous November 18, 2010 9:10 PM
While the phased transition is notabad idea, lack no signs which prove the country would be going toasuch transition should have been well-understood not to have misled the people. You didn't see the reason to criticize him but why other people see other way round and why he himself acknolwedges what he advocated for has turned out to be not as he'd expected? The answer itself is obvious. He should have known if he were to advocate the sham election, he would have to bear responsibility that the process be free and fair. Now, his active advocacy without any such guarantee has finally ended up as nothing butafraud. That is why we denounced him for his irresponsibility regarding the electoral irregularities and his stubbornness to stick to his already wrong course. If you are his staunch supporter, let him know what people think of him.
လွမ်းဆွေဘလော့မှ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း မှာရေးထားတဲ့ ကော်မန့်ပါ။
Wow .....!! Very gentleman statement .Sound looks like you- yourself so proud . You should bealeader of Myanmar because you are also same character with current army .Therefore we agreed to current generals because oppositions are also same characters without good performance .Don't compare with Bo Gyoke Aung San , though he used rude words , he already gave up his life for our country and he made challenging with Japanese & British generals.Your status is totally different with Bo Gyoke Aung San .All of your performance can see obviously .I just trust on DASSK because she is totally Bo Gyoke's blood .But she is too much kindness and super - sincerity .She is not deserve to generate in Myanmar ,she & Bo Gyoke are generated at wrong place .
Upset upset upset !!!.......:(:(:(
ချောတိုင်တတ်တာမဟုတ်ပါပြည်သူကိုချီးတွင်းထဲခုန်ဆင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်ပြီး နအဖ တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသောအလံရှူး တောင်းပန်ယုံဖြင့်ခင်ဗျားအမှားမကျေပါ၊
ခင်ဗျားတတ်နိုင်သမျှ ခင်ဗျားမှိုင်းတိုက်ခဲ့သောသူများကိုရှင်းပြ၍ ဒီမိုကရက်အင်အားစုများနှင့်ပူးပေါင်းပါ
During our fighting and chatting period , SPDC is more united and the new cabinet will appear soon .Then, we just follow everything they have done as usual .:P
So far, oppositions are still splitting because they are showing off that how much they know democrocy ...:)
Democracy meaning as below
- colorful arguments with lack of good outcome
- Condemened to those people who proposed different ideas with them
-Just write the blogs by using rude words on paper .
-Split organizations before it reach to goals.
During this , SPDC members are very united to prevent their enemies .They won't split forever on this issue and they know very well about weak point of demo-activists as they are eager to eat small amount of funds while generals are sitting on precious natural resources .
Now,the new generation army officers are getting chance to learn about technology because they can pay enough money and they know how to trade money & technological things .Everybody need money .
Don't under-estimated on competitors and enemy .
Hopefully our demo-alliance to get good strategy rather than talking and lack of good turn .We are boring this stage.We will participate .
သူတို့နဲ့က အခုမှကွဲနေတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ သူတို့က အခုမှ နအဖနဲ့ ကွဲလာတာ။ နအဖ အင်အားလျော့လာတယ်တောင် ပြောလို့ရသေးတယ်။
မှားတာလည်း ချောတိုင်တက်တာ တခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ မှားခဲ့တာ တောက်လျှောက်။ ချောတိုင်ထောင်ဖို့ အားပေးခဲ့တယ်။
တိုင်ကူရှာခဲ့တယ်။ ချောဆီကူသုတ်ခဲ့တယ်။ ချောတိုင်တက်ဖို့လည်း လိုက်ဆွယ်ခဲ့တယ်။
အခုတောင်းပန်နေတာက သူများတွေလို ချောတိုင်တက်တာတခုတည်း မှားမိသလိုမျိုးနဲ့ ဖောရှောလုပ်နေတာ။ ဒါတောင် တက်ရင်းအကျနာလို့ တောင်းပန်တာ။ ချောတိုင်ကို ဝေဖန်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ ချောဆီကူသုတ်ခဲ့လို့ နောင်တရတယ်လို့ ပြောတာမရှိဘူး။ နောက်ပြီး ဆက်တက်မယ် ဆိုပဲ။
ဦးပေါနှင့် အတင်းအဖျင်း စိတ်ဝင်စားသူများ
ဟားဟား . . . သိပ်ပြီး စောက်တင်းတွေပြောမနေနဲ့ဦး။ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို အချင်လို့ မထင်နဲ့လေ။ အဏာမြဲအောင် ဘယ်လို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပ်ကို ကျွမ်းကျင်တယ်။ ဂျင်ဝက်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး သူတို့ အိပ်ထဲထည့်ထားတာတွေ့တယ် မဟုတ်လား? အမေရိကန်နိုင်ငံရေး သမားတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်ခဲ့တာနော်။ အစ်စရေးလုပ်တဲ့ ဗျူဟာကို သူတို့က သုံးနေတာ။
နောက်ပြီး အစိုးရ တစ်ခု အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာ အစိုးရရဲ့ မီဒီယာတွေကို လူထုက ယုံမှ အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်။ နအဖ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံတို့ကို မယုံတဲ့အတွက် လူထုကို မထိမ်းထားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အမေရိကန်မှာ မီဒီယာတွေအားလုံးကို အစိုးရက တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပဲ သွယ်ဝိုက်ပြီးထိမ်းထားတာ သိလား?။ ဘယ်မီဒီယာမှ အမေရိကန် အစိုးရကို ချောင်ပိတ်မယ့် မေးခွန်းမျိုး မမေးဘူး။ ဥပမာ UN မှာ 9/11 ကိစ္စ အမေ၇ိကန် အစိုးရ ပတ်သက်တယ်လို့ ဗြောင်စွပ်စွဲခံရတာ .. . ဘယ်မီဒီယာတွေ အဲဒီအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့်တင်ပြခဲ့လဲ? အဖြစ်လောက်ပဲ တင်ပြခဲ့တာနော်။
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ . . ဂျာနယ်တွေက နအဖရွေးကောက်ပွဲကို အပြစ်တင်ဖို့ အဆင့် ၂ဆင့်ကျော်ရမယ်။ ဂျာနယ်တိုက်က အရဲစွန့်ပြီး ဝေဖန်တယ်.. ပြီးတော့ အဲဒီအရဲစွန့်တာကို စာပေစိစစ်ရေးက ထပ်ခွင့်ပြုပြန်တယ်။ ဒို့မြန်မာတွေက ဘာလို့ အဲလောက် သတ္တိုတွေရှိလာတာလဲ? ပြည်သူကို တောင်းပန်တယ်ဆိုပဲ။ ၀ါးဟားဟား။ ပြည်သူကို တောင်းပန်လိုက်ပြီဆိုတော့ ပြည်သူ့ဘက်က မီဒီယာဖြစ်သွားပြီ။ ပြည်သူတွေကို ပိတောက်မြေလိုပဲ နအဖကို အပြစ်တင်သလိုလိုနဲ့ နအဖဘက်ကနေ နေလိမ့်မယ်။ ကြည့်ပေါ့လေ။ ကြေးမုံနဲ့ ကျေးစေတမန်လို အစိုးရဘက်ကို မျက်ကန်းပါတဲ့ မီဒီယာလမ်းစဉ်ကို စွန့်လိုက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစဉ်းစားစား စောက်တင်းပြောကြ။
ဟန်ဆောင်ရန်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ၂ ပါတီအကြောင်းဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ နိုင်ငံရေးမှာ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်း တကယ်ရန်ဖြစ်တယ် မထင်ကြနဲ့။ ဂျာနယ်တွေက နအဖကို ဆော်တိုင်းလဲ တကယ်မထင်ကြနဲ့။
☀2headed, 1 party system
☀ Democracy Is One Step Closer To Oligarchy.
☀ Alex Jones: How The Elite Control Politics
☀ Ron Paul on the Two-Party System
☀ Young Americans fed up with two party political system?
☀ Two Party System Bad
☀ Two Party System: It Sucks!
တုံးလွန်.. အလွန်းသည့် ဒီမိုငတုံးများကို စိတ်ကုန်သည့်
Alex Jones isanut case conspiracy theorist who
talking about and since
you are quoting his work,
you must beanut case.
Media have to keep balanced
view although they can be
biasedabit. For instance,
the Economists magazine leans
to right while there are left
winged journals, BBC is pro
Arab, to take some examples.
I am not talking about low
class unreliable CNN which
is expensive Yankee version
of junta media like Kyae Mon.
Reading the Voice journal now. They put Daw Aung San Su Kyi's smiling picture meeting the citizens. Without Voice journal, the average citizen inside Burma may not know
those news. So I do not understand why some are barking at or bashing Ko Nay Win Maung and his team.
feed ပြင်လိုက်လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ reader နဲ့ဖတ်မှအဆင်ပြေပါတယ်။ feed ပြင်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့တစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(Alex Jones isanut case conspiracy theorist who does not know what he is talking about and since you are quoting his work, you must beanut case.)
အမည်မသိ ဒိမိုငတုံး November 19, 2010 3:58 PM
Alex Jones က ငကြောင်ဆိုရင် သူငကြောင် ဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက်နဲ့ ပြောပြပါလား။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက သင်ပေးသလို ကြက်တူရေးအသံနဲ့ conspiracy theorist ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပဲ စွတ်မအော်နဲ့။ သူက ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက Global Warming ဆိုတာ ဒီမိုအစိုးရတွေ အခွန်တိုးကောက်ချင်လို့ လုပ်ကြံဇတ်လမ်းလို့ ပြောခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတုံးက ဘယ်သူကမှ မယုံခဲ့ဘူး။ ဒီမိုအစိုးရတွေကို မုံန်းတီးလို့ သူက အတင်းအဖျင်းပြောတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။
Global Warming က လူတွေလုပ်တဲ့ မီးခိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါဆိုပြီး မင်းတို့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ရေးခဲ့တယ်.. မှတ်မိသေးလား?. . . မှတ်မိသေးလား? တောင်ဝန်ရိုးဒေသက ရေခဲတွေ နဲ့ မြောက်ဝန်ရိုးဒေသ ရေခဲတွေ အရေပျော်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ရေလွှမ်းတော့မယ်ဆိုပြီး BBC, CNN, FOX စတဲ့ ဒီမိုမီဒီယာအားလုံးက ပြောခဲ့တာပဲ။ ကြေးမုံသတင်းစာကလဲ ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့အတူတူ . . . ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာ မီးခိုးကြောင့်လို့ အော်ခဲ့တာပဲ။ သိပ်တုံး.. သိပ်အလွန်းတဲ့ . . ဒီမိုငတုံး ဘလော့တွေမှာလဲ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိမ်းသိမ်းပါ…. ဘာညာနဲ့ အော်ခဲ့တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဆိုရင် သူတို့ ကျွန်းတစ်ချို့ရေနစ်တော့မယ် ဆိုပြီး ကြေညာခဲ့တယ်။ နအဖအပါအ၀င် အစိုးရတွေ အားလုံးက အဲဒါကို တသံထဲ ထွက်ပြီး အော်ခဲ့တာပဲ။
UN က Email တွေ Hack လုပ်ခံရပြီးတော့ … UN သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် လိမ်ညာတာ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်လာတယ်လေ။ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကလဲ သူ့ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တာကို ၀န်ခံသွားတယ်။ ကဲဖြေစမ်းပါဦး. .. . .အရင်တုံးက Global Warming သတင်းတွေ ပလူပျံနေတာ အခုဘယ်ရောက်ကုန်လဲ? အဲဒီ UN သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ဘာလုပ်ပြစ်လဲဆိုတာ ဘယ်ဒီမိုမီဒီယာတွေက ထုတ်ရေးလဲ? သနားတယ်ကွာ… Global Warming ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မလားဆိုပြီး တွေးကြောက်ခဲ့တဲ့ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေကို သိပ်ကို သနား၏။ ပြောတိုင်းယုံ.. လိမ်လို့လွယ်တဲ့ .. ဒီမိုငတုံးတွေပဲ။ ၀ါးဟားဟား
၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မြအေးသမီး ဒုတိယဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေ့ကုန်ပြီလား? တော်တော်ကို အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ ဒီမိုတွေပဲ။ ဟိုကဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို ၅ မိနစ်ကြီးတောင် မိန့်ခွန်းပြောထားရတာ။ မင်းတို့ပဲ ဒုတိယဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ပြောခဲ့တာပဲ။ သူ့ကြောင့် မြန်မာလူငယ်တွေ နိုင်ငံရေး အသိပွင့်လင်းလာတယ်လေး ဘာလေးနဲ့။ အခုမှ အချိုးတွေပြောင်းကုန်တယ်။
☀ ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ မြန်မာအချင်းချင်း သွေးခွဲပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ကျေးဇူးတင်တာ ဒီမိုငတုံးပါ။
☀ မြန်မာနယ်မြေတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အိန္ဒိယကိုပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ကျေးဇူးတင်တာ ဒီမိုငတုံးတွေပါ။
☀ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ကျေးဇူးတင်တာ ဒီမိုငတုံးတွေပါ။
☀ နအဖရေးတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို စောက်တင်းပြောပြီးတော့… ၁၉၄၈ အင်္ဂလိပ်ရေးတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို အလေးထားနေတာ ဒီမိုငတုံးတွေပါ။
☀ ကမ္ဘာမှာ လိမ်လို့အလွယ်ဆုံး. . ငတုံးဖြစ်ဆုံးနဲ့ ပြောတိုင်းယုံတာကတော့ ကတော့ မြန်မာလူမျိုး ဒီမိုငတုံးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
☀ ကဲဗျာ… အဖြူတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ တရားဥပဒေက ဘယ်လိုလဲသိချင်ရင် ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သြော်.. အဲဒီဗီယိုက နအဖက ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးနော်.. ၀ါးဟားဟား
တုံးလွန်း.. အလွန်းပြီး သူတပါးကိုသာ အားကိုးလိုသည့် စိတ်ဓါတ်ကိုရွံသည့်
To Annon ,November 19, 2010 9:32 PM
Is the Voice Journal the only Journal in Town?? How pathetic you are!! No wonder the pathetic people like you support Nay Win Maung just by looking at where he got his degree, from which university and so on. Be reminded that people cannot be judged only by his degree but his own action. Because there arealot of educated bums like you out there.
What does it matter anymore...whether Nay Win Maung walking around in Yale campus or he isaPhD as he obviously did suck the junta' s ball...in educated manner ( u can put it that way if u like).
Dr. Nay Win Maung did not earn
Yale degree, nor PhD. His Dr.
is MBBS medical doctor. He
went there forafellowship.
The point is that he learned,
he got education and that makes
him better than uneducated or undereducated emotional chaps.
Zaw Myo, do you finish high school?
Global warming is real, scientists may become overzealous and they may have created infamous hockey stick (a statistical and graphical manipulation fabricated byaPhD student who wanted to support the claim that global temperature has risen recently). In general CO2
must be reduced. Even your father China is reducing carbon. You are
swallowing the words of nut case
Alex Jones who does not know what he is talking. I am fed up with loonies, red necks, Ah Bengs, peasants, dick heads and I am afraid you are one of them.
Even if he isadoctor , what does it matter anymore when he sucks the junta's ball.
Even if he is an educated emotionless creature, what does it matter more when he sucks the junta's ball like what the Kyaunt-Phunt did.
Justalittle differnt in way of sucking only. So, you too better don't suck nay win maung's ball and wake up, Mr. Educated-Friendly Third Group Lover.
P.S I purposely wrote "walking around in the campus " means just walking around ..you know. I didn't have any intention to say that he earned the degree from Yale.
Another emotional bum who cannot distinguish between sucking and giving the credit where it is due.
Even if you are emotionless and educated, what does these matter more when you suck" junta's ball-sucker's ball ",Mr. Emotionless Bum.
I feel that I am offering beer toabulls (Zaw Myo) and the cow (anon) above.
For dick head Zaw Myo, it was not
UN but University of East Anglia,
a British university where emails
were hacked. Alex Jones isanut
case and only other nuts take him
seriously. Tell me when he will
get Nobel for educating bulls.
For the anonymous cow above, bulls will mount you from behind and it ain't be pleasant.
whatever you said, what does that matter anymore when you suck" junta's ball-sucker's ball?
Smarter Than DEMO NGA TONES said...
After I read Ko Paw's
I'm working in an American company.
American english is not identical with original English especially in Grammatical usages.
Even there are disputes between Aussie English,US English and British English.All these different regions Englishmen can't write/speak as exactly as British English.
I saw many errors like above what Patriotic Citizen wrote but it doesn't matter.Even American Presidents in history had these mistakes?
For example, in the January 27, 2010, State of the Union address, US President Barack Obama said "Instead of rewarding failure, we only reward success. Instead of funding the status quo, we only invest in reform". What he meant to say was "Instead of rewarding failure, we reward only success. Instead of funding the status quo, we invest only in reform". However, this misuse is so common, particularly in American English, that many speakers will not realize that moving the adverb actually changes the meaning of the sentence.
So what's the point commented by these DUMB DEMO NGA TONE?(NGA TONE means DUMB/STUPID in Myanmar language)
(For dick head Zaw Myo, it was not UN but University of East Anglia,aBritish university where emails were hacked.)
အမည်မသိ November 20, 2010 3:23 PM
တုံးလိုက်တဲ့ ဒီမိုငတုံး။ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံး။ မင်းတို့တွေကို အဲဒီ တက္ကသိုလ်နာမည်နဲ့ email hack လုပ်ခံရတယ်လို့ ပြောလို့ နားလည်မယ့်ကောင်တွေလား? အဲဒီတက္ကသိုလ်နဲ့ UN နဲ့ ဆက်စပ်မှုကို မင်းသိရဲ့လား? ငတုံး။ အခုထက်ထိ စောက်ပါးစပ်က CO2 ကြောင့် ကမ္ဘာပူနွေးလာတယ်ပြောနေတုံး။ တခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေက CO2 ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာကို လေ့လာရဲ့လား? မလေ့လာပဲ.. CO2 ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ဒီမိုမီဒီယာတွေက ရေးထားတာကို ကြက်တူရွေးလို မအော်နဲ့။ Al Gore ကြီးတောင် လူတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးရပါတယ်လို့ အလိမ်ကောင်းလို့ ဒိုအညာက ပဲကြီးလှော်လောက်ပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ နိုဘယ်ဆုကြီးရထားတာကိုး။ ဒီတော့ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေ ယုံတာ မဆန်းပါဘူး။
ဒါနဲ့ . . အရင်တုံးက Global Warming သတင်းတွေ ပလူပျံနေတာ . . အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီသတင်းတွေ မရေးတော့တာက ကမ္ဘာကြီးက အဆင်ပြေသွားလို့လား? အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းတွေ ရေမြုပ်တော့မယ်လို့အော်နေတာ အခုတော့ ရေအောက်ရောက်သွားလို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေတာလား။ ငတုံးရေ.. ဦးဏှောက်ရှိရင် စဉ်းစား။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ပိုပြီးတောင် အေးလာတဲ့ အပိုင်းကို ရောက်လာပါပြီတဲ့။ ဟားဟား။ BBC ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ Documentary လေးမှာ ၀က်ဝံဖြူပေါက်စလေး ရေခဲတွေမရှိလို့ ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ ဟာလေးကို ကြည့်ပြီး အခုထက်ထိ မျက်ရည်ကျနေဆဲထင်ပါ့။ ၀ါးဟားဟား
ပြောသမျှယုံကာ တုံးလွန်း.. အလွန်းသော ဒီမိုငတုံးများကိုရွံသည့်
To Blog Owner Ng Paw ,
Our rice bowl is very important .You are very rich now , but our rice bowl is not full enough same as all of you who stimulate for pro-demo campaign .^_^:):P